Ubani akawuthandi candy okumnandi? Njengoba isibonelo, ukuya izivakashi, ngokungathathi naye isipho, imfuneko esemqoka lapho - ke emaphaketheni lemukelekako okuqukethwe okuhle. Yingakho emashalofini ezitolo zethu akuvamile ungajahi candy "Ferrero Rocher". Umkhiqizi, kuphambene ngokubona abantu abaningi - kungaqali "kukaRoshen" futhi inkampani abadumile Italian "Ferrero". Ngakho uma uthanda ushokoledi bendabuko European, ungaqiniseka ukuthi amaswidi e iphakethe segolide ziyokuwa ukunambitheka yakho.
It is nenkampani enkulu kunazo zonke Yaqalwa ngonyaka ka 1940 e Alba. Umsunguli wawo kwaba Michele Ferrero, owanika igama indalo yakhe siqu. Ngu Isifaniso, liye aqanjwe candies "Ferrero Rocher". Nokho, Umenzi, isibe odumile kungasho neze ngenxa amaswidi okumnandi. Imikhiqizo yokuqala elafika off the line umhlangano, kwaba ushokoledi unama. Ngo-1946, umthengi wathola ngenkulu intshiseko. Eqinisweni, le chocolate eliphezulu ne bhotela nati okugazingiwe. Kakade kusukela ngo-1954, i-brand siqanjwe kabusha, yena yanikezelwa ajwayelekile kithi namanje igama Nutella.
Sukuma udumo emhlabeni wonke
Nokho, le nkampani akuzange kuwumise ukukhiqizwa ushokoledi unama. Ngo-1968, eseneminyaka engu-abathengi kwamjabulisa imikhiqizo emisha, sesiye ushokoledi obucayi kakhulu egcwele ubisi ukhilimu. Waba isebangeni njengoba Kinder Chocolate. Okuqukethwe eliphezulu ubisi bavunyelwe ukuthi lo mkhiqizo muhle izingane. Ngemva okwengeziwe ingqikithi yeminyaka engu-6, inkampani usethule brand ezintsha zembulunga yonke, okuyinto namanje abathandwa zonke izingane. Lena iqanda ushokoledi ngethoyizi ngaphakathi. Cishe ngesikhathi esifanayo singena emakethe futhi candy "Ferrero Rocher". Umenzi imali enkulu yokudalwa wonke umphefumulo wayo, ngenxa yomhlaba got dessert esiphundu. By the way, cishe ngasikhathi sinye yazibonakalisa candy "Raffaello". Eqinisweni, ubuchwepheshe of umkhiqizo wabo kuyafana ezimweni zombili, igobolondo kuyinto esilucwecwana crispy, futhi ngaphakathi ezifihlakele ukhilimu emnene futhi ziyadliwa. Lezi amaswidi okunethezeka waletha izigidi inkampani zamadola nodumo.
Ukuthandwa phakathi izinyo elimnandi
Yiqiniso, namuhla emakethe kukhona omningi candy, okusho ukuthi njalo banelungelo lokuzikhethela. Kungani candies abathengi kwaphela iminyaka eminingi wakhethwa "Ferrero Rocher"? Umenzi ngakwazi ukwenza uphudingi ephelele - esiphundu, kulula, futhi ngendlela emangalisayo ezikhangayo. Uyilungu njengoba prezent futhi umhlobiso etafuleni, kanye uswidi enkulu. Ukunambitheka candy ungakwazi ukuncintisana namanye kophudingi abaningi. Yingakho njalo ngonyaka sha akaphelelwa kwayo, kunalokho, sinombono imikhiqizo emisha, yena umi phandle njengoba into enhle futhi ephelele - zakudala akunakuqhathaniswa. Nokho, namuhla, kukhona imibuzo eminingi kabani candies "Ferrero Rocher". Producer (njengoba siye kakade waveza) - kuyinto ngokuqinile Italy. It uphakamisa lo mbuzo ngokuqondene kuvulwa nomkhiqizi Ukrainian amaswidi ungwaqa elinegama elithi "Roshan".
Yini elindele ngamazinga emaphaketheni
Ingabe bonke abafundi kakade wazama amaswidi? Uma kungenjalo, khona-ke sekuyisikhathi ukuthola le njabulo. Amaswidi "Ferrero Rocher" (umkhiqizi - ezweni Italy) - lokhu kuyinto dessert omkhulu ezinoshukela, okuyinto ibhola oncibilikile futhi waffles camera namantongomane. Ngaphansi igobolondo crispy - ukhilimu emnene futhi hazelnuts lonke. Inhlanganisela ekahle ukuthi akunakwenzeka ukuba bathande.
Empeleni, kuba impela okusezingeni eliphezulu, kodwa injabulo kuyazuzisa yini ngempela. ERussia, lezi candies athandwa kakhulu. Bona ngokufanelekile basonta amaswidi premium, ngakho kuhambisana kahle ukuba abe khona. Okufakiwe emfushane kakhulu, kuze kube manje, kungatholakala iphakethe yokuthengisa ngesimo isikhencezo, isihlahla sikaKhisimusi, parallelepiped, ikhoni, kanye sikwele. Okufakiwe 100 amagremu kuyokulahlekisela ruble 280, futhi 350 g - ruble 852.
Njengoba singazi ngokuqondile ukuthenga iphakethe, futhi ubumnandi sokuqanjwa uqinisekile ukuthi kakhulu unesithakazelo. Nomkhiqizi ushokoledi "Ferrero Rocher" (Ubuye luhlobo ukukhiqizwa eRussia) sijabula izithako eyamukelekayo ngempela. Ngilusizo ukubabiza nzima, kodwa lutho yingozi candies futhi aqukethe. Lena amantongomane cocoa ibhotela, ubisi powder, ushukela, soy lecithin, nokhokho oyimpuphu kanye whey. Ngaphezu kwalokho, kukhona ingxenye ufulawa kakolweni amafutha yemifino, vanilla. Calories - 580 kcal 100g komkhiqizo.
Imboni ku uVladimir esifundeni
Yiqiniso, i-candy ongaqhubeki kithi evela e-Italiya, okulula kakhulu inkampani-umenzi kwaba ifektri e-Russia. Lesi sinqumo sathathwa ngo-2007, futhi ngemva kukhulunywe kangaka, uVladimir esifundeni okwakhethwa. Kakade 2009 emgqeni wokuqala ukukhiqizwa wethulwa. Namuhla kuba eziyinkimbinkimbi yesimanje zezimboni, ogama endaweni idlula m2 80 000. Ngesikhathi esifanayo inkampani yangaphandle inikeza hhayi kuphela abantu imisebenzi, kodwa futhi kunomthelela ukusebenza okuthuthukisiwe kwezomnotho endaweni.
inkampani yokukhiqiza "kukaRoshen"
Kusukela ekuqaleni ukungqubuzana e-Ukraine, le timu ubukeka ngaphezulu futhi baqonde izinto ezenzekayo kakhulu, ake ukuba ichashazi. amagama Ongwaqa wangqongqoza abantu udidekile futhi manje abaningi bacabange ukuthi nomkhiqizi ushokoledi "Ferrero Rocher" - Poroshenko. Eqinisweni, into enjalo siye ubesemtshelile ukuthi lokhu namakhekhe Italy. umakhi yabo uyakwazisa isiko kanye eminyakeni eminingi ophethe ibha okuyikhwalithi ezingeni eliphezulu kakhulu. Kodwa "kukaRoshen" - candy eshibhile, ngokuvamile ngezithako womuntu ongabazisayo. Nokho, akuyona kuphela ungwaqa enegama. Iqiniso ukuthi umenzi Ukrainian unqume ukuya nakakhulu futhi ngiyothatha isabelo emakethe, unqobile ngezilokotho amaNtaliyane. Yini okudingeka ngikwenze? Kunjalo, imikhiqizo ukukhululwa, efana kakhulu sha owaziwa, kuba umgwaqo ezifiselekayo. Ngokusobala lezi ngokucabangisisa umqondo womunye wawenziwa ku candy "Ferrero Rocher". Poroshenko Umkhiqizi (ukukhiqizwa isithombe ayikwazanga ukutholakala, kanye nabamele izinkampani Ukrainian ukuphika Eqinisweni yokusabalalisa kwalo mkhiqizo okudayisa chain) e isihloko liguqukile kancani bese Rocher amaswidi. abakhiqizi Italian sebefake ozakwabo Ukrainian enkantolo. Labo, esikhundleni salokho, wagomela ukuthi brand abazimele ngokuphelele, okuyinto lutho like umlingani wakhe Italy. Ngenxa yalokho, i-Ukraine inkampani "kukaRoshen" Inkantolo elahlekile mayelana Rocher brand, okusho ukuthi ikhasimende ngeke besakwazi ukukhohliswa.
Sonke kakhulu othanda amaswidi. Sithenga kubo lapho siya ukuvakashela, sithatha ekhaya for itiye, isipho futhi ukusebenza. Ngisho caramels abavamile benze ukuphila kwethu licace, ngithi lutho mayelana enkulu futhi emangalisa "Ferrero Rocher". ethile yabo kuphela - kuba inani lentengo eliphezulu, nakuba mhlawumbe kuwumqondo omuhle. Ukuze agqashule ekusebenzelaneni kwabo kuphela indlela eyodwa - lapho ibhokisi uphela. Uma kambe etholakalayo, ithuba ngokushesha ukuthola isisindo okweqile yayiyobizwa ikhuphuke kakhulu.
Bangaki abantu bazimisele ukukhokhela umsebenzi omkhulu yobuciko